पशुपतिमा थरिथरिका बाबा, नागा बाबाको रमिता – Maitri News
पशुपतिमा थरिथरिका बाबा, नागा बाबाको रमिता
काठमाडौं । भस्मेश्वर घाटको पारिपट्टि चन्द्रशिवालय क्षेत्रमा बाहिरबाट आएका झण्डै दुई दर्जनजति साधुहरु सुतिरहेका छन् । केही साधुहरु मध्यदिनमा धुनी तापेर गाँजासँगै रमाइरहेका छन् । कोही साधुचाहिँ पशुपति क्षेत्रमा बञ्चरोले रुख ढालिरहेको अवस्थामा पनि भेटिए । केही नागा बाबा रमिता देखाउँदै थिए ।
चारैतिर रमितेहरुको भीड छ । छिनछिनमा छेवैमा रहेका एक साधु झट्ट रिसाउँछन् । ‘जुत्ता लगाएर धूनी टेक्न आउनी ? केको रमिता हो ? हिन्दी भाषामा उनको गर्जन सुनेपछि एकाएक सबैको सात्तो जान्छ । केही पछि हट्छन् । एकछिनपछि फेरि पुरानै अवस्था ।
आर्यघाटमा बलिरहेको शवबाट निस्किएको सल्फर डाइअक्साईड युक्त गन्धले मन्त्रमुग्ध भएका नाथ सम्प्रदायका अघोरीहरु मध्यदिनमा बाक्लो च्यादर ओढेर आफ्नो थकान मेटिरहेका छन् । ‘रातमें भगवानका स्तुति करना है । अभि मुझे सोने दो ।’ पशुपतिको यात्राबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा एउटै वाक्यमा उत्तर दिएर अर्को पट्टि फर्किए भस्मेश्वर घाटको ठीक सम्मुखमा भेटिएका एक अघोरीले ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक डा। घनश्याम खतिवडाले यो वर्ष स्वदेशी र विदेशी गरी करिब २० लाखको हाराहारीमा दर्शनार्थीहरु आउने अपेक्षा राखिएको बताए । यो वर्ष सुरक्षा र व्यवस्थित रुपमा दर्शनार्थीहरुले दर्शन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
Previous Previous post: पशुपतिनाथमा १४२ किलो सुनको जलहरी